Kurapa PSA Oxygen & Nitrogen Dyara | Mhepo Kuparadzanisa Chikamu - Oxygen jenareta Midziyo
AIR KUPARADZANA Midziyo
TINOPA ZVAKANAKA ZVAKANAKA
Okisijeni & Nitrogen Factory Project kuti Medi ...
Zvigadzirwa Zvakanakira 1: Yakazara otomatiki Rotary Mhepo Compressor. 2: Yakadzika kwazvo simba rekushandisa. 3: Kuchengetedza kwemvura semhepo compressor mweya wakatonhora. 4: 100% isina simbi yekuvaka ikholamu maererano neASME zviyero. 5: Yakachena yakachena Oxygen yekurapa / chipatara kushandiswa. 6: Skid yakasimudzwa vhezheni (Hapana hwaro hunodiwa) 7: Kurumidza kutanga uye Kudzima nguva. 8: Kuzadza okisijeni mu cylinder ne liquid okisijeni pombi Kunyorera Minda Oxygen, nitrogen, argon uye imwe isingawanzo gasi inogadzirwa ...
Gesi Yekurapa Oxygen Yechipatara Inoshandisa Medi ...
Chigadzirwa Mabhenefiti 1.Simple kumisikidza uye kugadzirisa nekuda kwemodular dhizaini uye kuvaka. 2.Fully zvoga hurongwa kuti nyore uye hwakavimbika oparesheni. 3.Guaranteed kuwanikwa kweiyo yakachena-yakachena maindasitiri magasi. 4.Guaranteed nekuwanikwa kwechigadzirwa mune yemvura chikamu chinofanira kuchengetwa kuti chishandiswe panguva chero yekuchengetedza mashandiro. 5.Kuderera kwesimba kushandiswa. 6.Short nguva yekuendesa. Kunyorera Minda Oxygen, nitrogen, argon uye imwe isingawanzo gasi inogadzirwa nemhepo yekuparadzanisa unit ...
Liquid Nitrogen chirimwa Liquid Nitrogen Gasi chirimwa ...
Zvigadzirwa Zvakanakira Isu tinogadzira okisijeni yekudyara yesirinda yekuzadza nezvakanakisa zvinhu uye zvikamu Isu tinogadzirisa zvirimwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi uye mamiriro emuno. Isu tinomira mumusika wegasi maindasitiri isu tinopa yakanakisa mubatanidzwa wemutengo uye kugona kwedu masisitimu. Kuve izere michina, zvirimwa zvinogona kumhanya zvisina kuchengetedzwa uye zvinogona zvakare kuita kure kurekuongorora dambudziko. Kuchengetedza kwekugadzira kunowedzera kushanda uye kunoderedza simba rekushandisa nekudaro kuchengetedza sig ...
Liquid Oxygen uye Nitrogen Kugadzirwa Kwekudyara / Liq ...
Zvigadzirwa Zvakanakira Isu tinozivikanwa nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi mukugadzira zvinwiwa zvemhepo okisijeni zvinovakirwa pane cryogenic distillation tekinoroji. Kugadzira kwedu kwakaringana kunoita kuti edu masisitimu egasi akavimbika uye ashande zvakanaka zvichikonzera kuderera kwekushandisa mitengo. Kugadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu uye zvinoriumba, yedu yemvura okisijeni miti inogara kwenguva refu kwazvo inoda kushoma kugadziriswa. Nekuteerera kwedu neyakaomarara mhando kudzora matanho, isu h ...
Cryogenic mhando yakakwira inoshanda zvakanaka yakachena kuchena nitro ...
Chigadzirwa Mabhenefiti 1.Simple kumisikidza uye kugadzirisa nekuda kwemodular dhizaini uye kuvaka. 2.Fully zvoga hurongwa kuti nyore uye hwakavimbika oparesheni. 3.Guaranteed kuwanikwa kweiyo yakachena-yakachena maindasitiri magasi. 4.Guaranteed nekuwanikwa kwechigadzirwa mune yemvura chikamu chinofanira kuchengetwa kuti chishandiswe panguva chero yekuchengetedza mashandiro. 5.Kuderera kwesimba kushandiswa. 6.Short nguva yekuendesa. Kunyorera Minda Oxygen, nitrogen, argon uye imwe isingawanzo gasi inogadzirwa nemweya kupatsanurwa ...
Cryogenic okisijeni chirimwa mutengo mvura okisijeni chirimwa
Chigadzirwa Mabhenefiti 1: Iyo dhizaini yemuti uyu ndeyekuchengetedza kuchengetedzwa, kuchengetedza simba uye nyore kushanda uye kugadzirisa. Iyo tekinoroji iri kutungamira chinzvimbo munyika. A: Mutengi anoda yakawanda yekugadzira mvura, saka isu tinopa yepakati kumanikidza mweya yekudzokorora maitiro ekuchengetedza iyo mari uye simba rekushandisa. B: Isu tinoshandisa kudzokorora mweya compressor uye yakakwira, yakaderera kuyedza. nzira yekuwedzera yekuchengetedza magetsi. 2: Inotora DCS komputa kutonga ...
Cryogenic yepakati saizi yemvura okisijeni gasi chirimwa L ...
Chikwereti chemugadziri-chemvura-okisijeni-nitro ...
Chigadzirwa Zvakanakira Tinotora nzira dzakasiyana dzekurongedza zvinoenderana nezvinodiwa. Akaputirwa mabhegi uye mabhokisi emapuranga anowanzo shandiswa kusaisa mvura, guruva-chiratidzo uye kushamisika-chiratidzo zvinangwa, kuve nechokwadi chekuti yega michina inoramba iri mumamiriro akakwana mushure mekusununguka. Panyaya yekugadziriswa kwezvinhu, kambani iyi ine imba yekuchengetera hombe uye yakasarudzika 800 tani yemari yakazvimiririra wharf. Tinogona kununura mazana mashanu ematani eakakura cargos zvakananga kuburikidza nemukoto kuShanghai port. Isu tinewo akati wandei ...
Industrial Scale PSA Kwezvokudya Nemiti Concentrator Kwezvokudya Nemiti ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Isu tinogadzira uye tinotumira kunze otomatiki otomatiki chirimwa uye nitrogen chirimwa che cylinder kuzadza neyechangoburwa cryogenic distillatio ...
Psa okisijeni concentrator / Psa Nitrogen Plant kuti ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Oxygen igasi rinokosha mukutsigira hupenyu mu Pasi, yakakosha muchipatara, oxygen oksijeni inoita basa rakakosha kwazvo ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Isu tinogadzira PSA okisijeni chirimwa tichishandisa iyo yazvino PSA ( Pressure Swing Adsorption) tekinoroji. Kuva anotungamira PSA okisijeni chirimwa manu ...
Rondedzero Kubuda (Nm³ / h) Inoshanda gasi kushandiswa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Mapepa nemaPurp maindasitiri eOxy kuchenesa uye kusarudzika 2: Girazi maindasitiri ekuvandudza kwevira 3: Metallurgical industr ...
Rondedzero kuburitsa (Nm³ / h) Inoshanda gasi yekushandisa (Nm³ / h) yekuchenesa mweya system Vanoisa kunze caliber ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ORN-100A 100 17.5 ...
Psa Nitrogen Production gasi chirimwa Psa Nitrogen ...
90% -99.9999% Rucheno uye Hwakakura Huru PSA Nitr ...
Hangzhou OuRui Air Separation Equipment Co., Ltd.iri mune yakanaka Fuchun Rwizi bhangi, taundi rekumusha kweSun Quan, Emperor weEastern Wu, iri kumucheto kweHangzhou Tonglu Jiangnan New Area, pakati peHangzhou West Lake uye nyika inoyevedza. mavara Qiandao Lake, Yaolin Fairyland, Hangzhou New Expressway Fengchuan kubuda ingori makiromita 1.5 kubva kukambani, traffic iri nyore.
Tora chikamu mune zvekuratidzira zviitiko
PSA oksijeni jenareta inoita basa rakakosha mumaindasitiri
PSA okisijeni jenareta inoshandisa zeolite mamorekuru sieve seye adsorbent, uye inoshandisa musimboti wekumanikidza kushambadzira uye kudzikisira desorption kushambadza uye kusunungura okisijeni kubva mumhepo, nokudaro ichiparadzanisa okisijeni kubva kune otomatiki michina. Kupatsanurwa kweO2 uye N2 ne zeolite molecular sieve ...
Mutungamiri Moon Jae-in vekuSouth Korea vakasangana naVaDing vechikwata chedu, vachitarisira kuve nekudyidzana kuri nani uye nekumberi mune ramangwana. Kuvimba mukambani yedu uye chigadzirwa chedu.Ngativei nechivimbo chikuru chekuita zvigadzirwa zvirinani uye kuzvitengesa. pasi rese. ...
Na2026, wepasi rose mweya wekuparadzanisa musika wemusika uchaona kukura kwakakura